अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो, अन्य देशको कति ? (तालिकासहित) – Everest Pati
अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो, अन्य देशको कति ? (तालिकासहित)
काठमाडौँ,चैत २४ – आज सोमबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको विनिमयदर उकालो लागेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय २२ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ। भने आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९२ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज नेपाली बजारमा कतारी रियाल एकको खरिद दर ३३ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। भने आज युरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ३१ रुपैयाँ ५२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३२ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय २२ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय २४ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ।
भने आज सोमबार कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ९३ रुपैयाँ ४६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ९५ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। भने आज युएई दिराम एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १३ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ। भने स्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ४९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ पैयाँ ९४ पैसा रहेको छ।
लकडाउनपछि पशुपतिमा जलाउन ल्याइने शवको संख्या घट्यो